မန္တလေးမြို့၌ မိုးလေဝသရေဒါစခန်း ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်မည် | The Ladies
Home » မန္တလေးမြို့၌ မိုးလေဝသရေဒါစခန်း ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်မည်
မန္တလေးမြို့၌ မိုးလေဝသရေဒါစခန်း ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ဖွင့်မည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အနီး၌ တည်ဆောက် နေသည့် မိုးလေဝသ ရေဒါစခန်း တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းပြီးစီး သွားပြီဖြစ်၍ ယခုနှစ်ကုန်တွင် ဖွင့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန (အထက်မြန်မာပြည်ဌာနခွဲ)မှ ဦးကျော်လွင်ဦးက ပြောသည်။
ဂျပန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အေဂျင်စီ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှုဖြင့် ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာက စတင်ခဲ့၍ ယခုအခါ လုပ်ငန်းများ ပြီးစီးပြီဖြစ်ရာ နိုဝင်ဘာ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဌာနမှအင်ဂျင်နီယာများကို ရေဒါကိရိယာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ကိုင်တွယ်သုံးစွဲခြင်း ဆိုင်ရာတို့ကို သင်ကြားပေး နေကြောင်း သိရသည်။
“'ရေဒါကိရိယာကို အသုံးပြုနိုင်ပြီဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်းမှာ စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးထိ ရေဒါ ပုံရိပ်တွေ ဖမ်းမိနိုင် တယ်၊ အဲဒီ ပုံရိပ်တွေနဲ့ အထက်အညာဒေသ မှာဖြစ်ပေါ်နိုင် တဲ့ မုန်တိုင်းတွေ၊ မိုးတိမ်တောင်တွေနဲ့ မိုးရွာသွန်းမှု အခြေ အနေတွေကို ထုတ်ပြန်ပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်''ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့မိုးလေဝသ အစီအစဉ်ဖြင့် ၁၉၇၄ ခုနှစ်တွင် ကျောက်ဖြူမြို့၌ မင်းပြင်မုန်တိုင်းပြ ရေဒါစခန်းတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ကြာရှည်တည်တံ့စွာ သုံးစွဲ နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ၁၉၉၄ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒဦးစီး ဌာနမှ ရေဒါကိရိယာမပါဘဲ မိုးလေဝသသတိပေးချက်များ ခန့်မှန်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် ရေဒါ သုံးလုံးတပ်ဆင်ရန် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်မှစ၍ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ကျောက်ဖြူ ရေဒါစခန်းကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ရေဒါပုံရိပ်များဖြင့် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များ ထုတ်ပြန်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ရေဒါရဲ့ အားသာချက်က ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ ကမ်းရိုးတန်းကို မုန်တိုင်းတွေ ချဉ်းကပ်လာတဲ့ အခြေအနေကို ရေဒါပုံရိပ်က တစ်ဆင့် သဲသဲကွဲကွဲမြင်နိုင် တယ်၊ မုန်တိုင်းရဲ့ ဗဟိုချက်၊ တည်နေရာ၊ အရွယ်အစားနဲ့ ဘယ်လောက် အမြန်နှုန်းနဲ့ ဦးတည်လာမယ် ဆိုတာကို အနီးစပ်ဆုံး အချိန်မီသတင်း ထုတ်ပြန်နိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်''ဟု ၄င်းက ဆက်လက် ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ရေဒါသုံးခုမှ ဖမ်းယူရရှိသော ပုံရိပ်များကို နေပြည်တော် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းရေး စောင့်ကြည့်ဌာနမှ ဂြိုဟ်တုစနစ်မှ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုကာ မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်များကို ကြိုတင်ထောက်လှမ်း သိရှိနိုင်ကာ အချိန်မီ သတင်း ထုတ်ပြန်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
The Ladies News
NCA တွင် လက်မှတ်ရေထိုးထားသည့် RCSS နှင့် PNLO တို့ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွား
ထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့် ရှေ့ဆက်မည့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် များနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ သံတမန်များကို NCA လက်မှတ်ထိုး အဖွဲ့များ ရှင်းလင်း
ကျောက်ဂူဆရာတော်၏ ရုပ်ကလာပ်တော်ကို မန္တလေးသို့ သယ်ဆောင်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိ
မက်ဂရီဂေါ်ကို အနိုင်ယူထားနိုင်တဲ့ ခါဘီကို မေ၀ဲသာ ထပ်မံစိန်ခေါ်
စက်တင်ဘာလ အတွက် လာလီဂါ အကောင်းဆုံး ကစားသမားဆုကို မက်ဆီ ဆွတ်ခူး
တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ် ရိုးရာလှေလှော်ပြိုင်ပွဲ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နှင့် ၂၈ ရက် တို့တွင် ကျင်းပမည်
လွှတ်တော်များ ဟန်ချက်ပျက်နေသည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌပြောကြား
မခွဲထွက်ရေးကိစ္စကို လေးလေးနက်နက် ဆက်လက်ဆွေးနွေးမည်ဟု ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်
ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျူးကျော်ဈေးဆိုင်များ ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားနိုင်ရေးအတွက် လူမှုရေးဝန်ကြီး ကိုယ်တိုင်သွားရောက် ဆွေးနွေး
Address - No.4 Building 5, MICT Park, Hlaing Township, Yangon.
Call Us - 09 789 477 068
Email - theladiesjournal@gmail.com
Copyright © The Ladies.
Developed by Right Click.